प्रचण्डका विश्वास पात्रको ओलीलाई समर्थन, ओलीको गणित बलियो बन्दै, प्रचण्ड–नेपालको खिचडी पाक्ला त ? – Maitri News
प्रचण्डका विश्वास पात्रको ओलीलाई समर्थन, ओलीको गणित बलियो बन्दै, प्रचण्ड–नेपालको खिचडी पाक्ला त ?
Mohan Bastola April 28, 2020
काठमाडौँ । नेपाली जनताले अथाह आशा र भरोसा गरेर पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट दिए पनि नेकपा भित्रकै केही शीर्ष नेताको कुर्सी मोहका कारण पछिल्लो समय नेकपा निकै ठूलो किचलोमा परेको छ । कोरोनाको कहरमा नेपाली जनता पिल्सिरहेका बेला कुर्सी मोहमै लिप्त भएर केही नेताले कोठे बैठकलाई निरन्तरता दिदैँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेपछि ओलीले पनि आफ्नो तयारी थालेको बुझिएको छ । सकेसम्म पार्टीमा असहज अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ ।
उहाँले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सामना गरेर अघि बढ्न एक जुट हुनु पर्ने बेलामा कुर्सीका लागि रस्साकस्सी गर्दा सन्देश नराम्रो जाने भन्दै घनीभूत छलफललाई निरन्तरता दिनुभएको छ । तर, जसरी पनि ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतका साथ नेपाल–प्रचण्डहरु लागे आफू पनि पछि नहट्ने संकेतका साथ ओलीले गणिततिर ध्यान दिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलबाट समेत हटाएर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबैबाट बाहिर राख्ने खेल गरे आफू पनि पछि नहट्ने संकेतका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाका गणित जोड्न लाग्नु भएको बुझिएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुमा पूर्व एमाले तर्फबाट १ सय २१ र पूर्वमाओवादी तर्फबाट ५३ जना छन् । जम्मा नेकपाका प्रतिनिधिसभामा कुल १ सय ७४ जना सांसद छन् । १ सय २१ मध्ये ओली समूहका मात्रै अहिले ८२ जना सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमत कायमै गर्न ८८ जना सांसद चाहिन्छ ।
त्यसका लागि ओलीले ४ जना सांसद मात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके संसदीय दलको नेता बन्न उहाँलाई पुग्छ । गणित अनुसार ३९ जना माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल समूहका छन् । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिबाट दिक्क भएका पूर्वमाओवादी समूहका केही सांसद समेत अहिले ओली खेमामा उभिने क्रम जारी रहेपछि ओलीलाई बहुमत पुर्याउन कुनै सकस नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली यसका लागि आफ्ना समूहका नेताहरुलाई सो कामका लागि खटाइरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ओली आफ्नो पक्षमा घटिमा पनि ९८ जना सांसाद पुर्याउने योजनामा लागेको बुझिन्छ ।
यसो भयो भने ओली–प्रचण्डको खिचडी नपाक्ने प्रष्ट छ । स्रोतका अनुसार माधब नेपाल, झलनाथ र गौतम समूहका केही सांसदहरु पनि ओली समूहमा आउने कुरामा ओली समूह ढुक्क रहेको छ । ओलीले आज बालुवाटारमा केही सांसदहरुलाई बोलाएर आफूलाई साथ दिन आग्रह नै गरिसकेका कारण पनि ओली समूह बहुमत पुग्नेमा ढुक्क छ । सोमबारमात्रै विभिन्न प्रदेशमा रहेका करीब ३२ जना जति सांसदहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएको स्रोतको दाबी छ । यदि भोलि साँझ हुने सचिबालयको वैठकमा अध्यक्ष ओलीलाई अनावश्यक दबाब दियो भने पार्टीमा अप्रिय घटना हुनसक्ने एक नेताले मैत्रीन्यूजलाई बताउनु भएको छ । ओलीलाई गलाउने खेलमा लागेका केही नेता पछिल्लो समय ओलीको गणित बलियो बन्दै गएपछि केही नरम बनेको समेत बुझिएको छ ।
प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिने लेखराज भट्टले समेत ओलीलाई साथ दिने खुलमखुला बताएपछि प्रचण्ड गुटमा समेत पहिरो जाने संकेत देखिएको छ ।
Previous Previous post: भोलि बुधबार साँझ ५ बजे सचिवालय बैठक
Next Next post: कोरोनाबाट अमेरिकामा ५७ हजार जनाको मृत्यु